ဒတ်ခ်ျ pastry and confectionery | Absolut ခရီးသွား
ဒံယလေက | | ဟော်လန်
La နယ်သာလန်၏ gastronomy ပြင်သစ်၊ စပိန်သို့မဟုတ်အီတလီကဲ့သို့သောအခြားဥရောပနိုင်ငံများ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာမရှိပါ။ အဲဒီအစား ဒတ်ခ်ျ pastry ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ဒတ်ခ်ျများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမပျက်စီးနိုင်သောချိုသောသွားများအဖြစ်အချိုပွဲများနှင့်သကြားလုံးအမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်စားသုံးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ဆက်မလုပ်မီဤတွင်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့စာမူသည်ခဲဖွယ်စားဖွယ်များနှင့်သွေးဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အစားအသောက်ရှိသူများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုသည်မဟုတ်ပါ။
1.1 Zoute ကျဆင်းသည်
2 ဒတ်ခ်ျခရစ္စမတ် pastry
2.1 စိန့်က Nicholas ကွတ်ကီးများ
၎င်းသည် Holland တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စားသုံးသောချိုချဉ်ရည်ဖြစ်ပြီးဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ လူဇင်ဘတ်နှင့်ဂျာမနီ၏အချို့ဒေသများတွင်လည်းဖြစ်သည်။ The zoute တစ်စက် ("ဆားငန်ပေါက်") ကိုအနက်ရောင် Cube များဖြင့်ရောင်းချသည်။ ၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည် Gummy ၏အသွင်အပြင်နှင့်တူပြီးအရသာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် သကြား။ သူတို့ပါဝင်သောဆားပမာဏပေါ် မူတည်၍ မျိုးကွဲလေးမျိုးရှိသည်။
ဒတ်ခ်ျများသည်၎င်းတို့ကိုချစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအမှန်တကယ်စားသော်လည်းအချို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို zoute drop ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ အချို့သောကိတ်မုန့်များတွင်၎င်းတို့ကိုအုန်းသီးအပင်၊ ပူစီနံ၊ ပျားရည်၊ ပင်လယ်အော်အရွက်နှင့်အခြားအရသာရှိသောအရသာများကိုရောင်းချသည်။
ဒါ ဂန္တ ၀ င်ဘယ်လ်ဂျီယံ waffle ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သော caramelized version ဖြစ်သည် (ဒတ်ခ်ျဘာသာဖြင့်) ခေါင်မိုး ရည်နှင့်ဆိုလိုသည် ဖယောင်း ဒါ waffle ပါပဲ။ ဒီအချိုပွဲကိုရင်ပြင်များခွဲခြားထားသောအထူးဒယ်အိုးတွင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ပြင်ဆင်နေစဉ်ကမုန့်စိမ်းကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ခုတ်ဖြတ်သည်။
Stroopwafel - ကျော်ကြားသော waffle-waffles ဗားရှင်းဖြစ်သည်
လူကြိုက်များသော .ရာဝတီ ၎င်းသည်အသီးများနှင့်ပြည့်နေသောတဆေးမုန့်စိမ်းမှပြုလုပ်သောချိုသောကိတ်မုန့် (ပန်းသီး၊ apricot, နာနတ်သီး၊ Plum သို့မဟုတ်သီး) ဖြစ်သည်။ အချို့သောဒတ်ခ်ျ pastry ချက်ပြုတ်နည်းများတွင် custard သို့မဟုတ်ရာဘာကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်သည်။
ရိုးရာ vlaai ၏ထူးခြားသောမျိုးကွဲအချို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆန်တစ်မျိုးသည်ဆန်နှင့်မုန့်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၊ အခြားသူများမှာမူမုန့်သို့မဟုတ်ချောကလက်ကိုကြာရှည်စွာခံကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိမည်သည့်မြို့သို့မဟုတ်မည်သည့်မြို့မဆိုလမ်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏နှာခေါင်းကိုတွန်းလှန်။ မရသောအနံ့ဆိုးများကြောင့်လှည့်စားလေ့ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင်ဤကလေးငယ်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်လမ်းဘေးဆိုင်ငယ်များရှိသည် အရည်ကျိုထောပတ်နှင့်အမှုန့်သကြားနှင့်အတူပူ pancakes.
Poffertjes - ဒတ်ခ်ျအသေးစား pancakes
ဒတ်ခ်ျကဖေးများ၌လည်းကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ရန်အတွက် poffertjes များကိုချိုမြိန်သောအစာအဖြစ်ရောင်းချကြသည်။ ဟုခေါ်တွင်ဤထုတ်ကုန်အတွက်အထူးပြုစတိုးဆိုင်များပင်ရှိပါသည် poffertjeskraam.
အထူးသဖြင့်ခရစ္စမတ်ကာလတွင်ဒတ်ခ်ျအစားအစာများသည်ကွဲပြားသည်။ အထူးအခါသမယများသည်အထူးအရသာများလိုအပ်သည်။ The Navidad နယ်သာလန်၌တည်၏ စိန့်နီကိုးလပ်စ်နေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင်စတင်ကျင်းပသည်။Sinterklaas).
စိန့်က Nicholas ကွတ်ကီးများ
စိန့်နီကိုးလပ်စ်ကိုသူတို့လက်ဆောင်များနှင့်အတူရောက်ရှိသည့်နေ့တွင်ဒတ်ခ်ျကလေးများသည်ချောကလက်ပူခြင်းနှင့်ကွတ်ကီးများစားခြင်းဖြင့်စောင့်ဆိုင်းမှုကိုချိုစေကြသည်။ လက်၌အရက်တစ်ခွက်နှင့်အတူလူကြီးများ, အတူတူပင်လုပ်ပါ။
စိန့်က Nicholas နေ့အဘို့အ Pepernoten
စိန့်က Nicholas ၏လက်ထောက် Piet သည်ကလေးငယ်များအကြားသကြားလုံးများကိုဖြန့်ဝေပေးသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း (ကောက်၊ ပျားရည်နှင့် anise ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမမှန်သည့်ကွတ်ကီးသေးသေးများ) နှင့် kruidnoten ဖြစ်သည် ဂျင်း။ ဒါဟာအစ၏ဝေမျှဖြန့်ဝေ ကျိုက်ထီးရိုး, ဗာဒံသီးငါးပိနှင့်ပြည့်စုံတစ် puff pastry ။
ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်ကဲ့သို့ပင်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိခရစ်စမတ်နေ့သည်ကောင်းမွန်စွာစုဆောင်းထားသောစားပွဲတစ်ဝိုက်ရှိမိသားစုတစ်စုအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲနှင့်အတူအထှတျအထိ ကွမ်းခြံကုန်း, မကြာခဏလည်းဗာဒံငါးပိနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်သီးစပျစ်သီးပျဉ်ပေါင်မုန့်။ ဒီကိတ်မုန့်, ​​ဒတ်ခ်ျ pastry အတွက်ဂန္ချက်ပြုတ်, ဂျာမနီနှင့်အခြားဗဟိုဥရောပနိုင်ငံများအတွက်ပြင်ဆင်သောမုန့်နှင့်တူ၏။
နယ်သာလန်ရှိခရစ္စမတ်ညစာတွင်ချယ်ရီ: အ kerststol
ဘာသာရေးအိမ်ထောင်စုများ၌ kerststol ကိုအခြားအထူးအချိုပွဲတစ်ခုတွင်အစားထိုးလိုကြသည်။ beschuit တွေ့ဆုံခဲ့သည် muisjes, sugary anise ဖုံးလွှမ်းဒတ်ခ်ျရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်။ ၎င်းသည်သခင်ယေရှု၏မွေးနေ့ကိုကျင်းပခြင်းနှင့်မည်သည့်မွေးနေ့ပွဲကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးကျင်းပရန်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
နှစ်သစ်ကူးအကြိုညတွင်မီးဖိုချောင်မှလာသည့်နက်သောအအေးခန်းမှဆီ၏အနံ့သည်ဒတ်ခ်ျအိမ်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကိုအတွက်အရသာ oliebollen, ဖုန်မှုန့်သကြားနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သို့မဟုတ်ပန်းသီးနှင့်စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်ပြည့်စုံသောမုန့်စိမ်း fritters ။
ဒေသတွင်းရှိ oliebollen မျိုးကွဲများ (ဘာသာပြန် - "buns buns") ရှိသည်။ ဥပမာ၊ လိုင်ဘမ်မန်းဒေသတွင်၎င်းတို့သည်ဒိုးနပ်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးပွဲတော်ကျင်းပရန်လည်းပြင်ဆင်ထားကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များရှိဤ fritters အထူးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူပြင်ဆင်ထားနှင့်အထူးသဖြင့်လုံးဝနီးပါး rounded ဖြစ်ကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ဒတ်ခ်ျ pastry နှင့် confectionery
မာစတာ Alejandro Obregón၏အကျင့်ကို